Maxaa ka jira in Maamulkii Gedo ee hoos-tagayay DFS loo soo qaadayo Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Maxaa ka jira in Maamulkii Gedo ee hoos-tagayay DFS loo soo qaadayo...
Maxaa ka jira in Maamulkii Gedo ee hoos-tagayay DFS loo soo qaadayo Muqdisho
Warar soo baxaya ayaa sheegaya Maamulkii Gedo ee DFS hoos-tagayay in loo soo qaadayo magaalada Muqdisho, taasoo bilow u noqon doonta dadaalada xal u helida xiisada maamul ee ka jirtay gobolkaas, sida ay xaqiijinayaan ilo wareedyo ku dhow kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Jubbaland ayaa sheegay waxoogaa horumar laga sameeyay wada hadalada Muqdisho ku dhex maraya Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, kaasoo looga arrinsanayay xal ka gaarista arrinta Gedo.
Saraakiisha Jubbaland ee xogta ka haya wada hadalada in dowladda Federaalka mabda’ ahaan u aqbaleen arrinta Gedo in Ciidamada laga soo saaro, iyadoo loo saarayo Guddi Farsamo, lana bilaabi jawi dib u heshiisiin.
Wararka ayaa sheegaya in Maamulkii Gobolka Gedo ee hoos-tagayay DFS la isugu geeyay degmada Doolow, si halkaas looga soo qaado.
Hase ahaatee Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Gedo ee hoos-tagaya DFS ayaa la sheegay inay ku gacan seyreen qorshaha la doonayo in looga soo saaro Gedo, loona keeno Muqdisho.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa dhowaan shuruud ku xiray kulanka saddex geesoodka ee isaga, Madaxweyne Farmaajo iyo Saciid Deni, waxaana uu dalbaday in dowladda Federaalka ka soo saarto ciidankii ay geysay Gobolka Gedo, isla markaana dibna loogu soo celiyo Maamulka Gobolka Gedo ee ay dowladda Federaalka ka goysay Jubbaland.
Dowladda Federaalka ayaa muddo sanad ah si toos ah u maamuleysay Gobolka Gedo, halkaasoo ay geysay ciidamo iyo hub fara badan, waxaana Maamuladii degmooyinka Gobolka Gedo u magacawday Guddoomiyeyaal gaar ah oo ka madax bannaan maamulka Axmed Madoobe, taasoo xiisadda siyaasadeed iyo mid amni ee ka jirtay Gobolka Gedo weji cusub gashay.